ကောင်းကင်ကို: အေးဘက်ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်
Posted by Kaung Kin Ko at 11:11 AM
အကိုကြီးရေ နှိုင်းယှဉ်ခံစားမသွားတာလား။ ကဗျာဖတ်သွားတယ်ဗျ။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ :)
အေးဘက် ကိုရောက်ဖူးသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါ..။
ABAC မှာ ကျောင်းလာတက်တာပါ
အဖိ ...ဒီးထိစို့ ဆိုတာကျနော်ဗျ....admin ပဲပေါ်လို့
ကဗျာလေးကို နှစ်သက်စွာ ခံစားသွားပါတယ်....:D
အေးဘက်ကို မရောက်ဘူးပေမယ့် ရင်းနှီးနေတယ်… အဲဒီမှာ RITကအရမ်းတော်တဲ့ ဆရာကြီးတွေ အများကြီးပဲ… ပင်စင်သွားတဲ့ အရွယ်ပေမယ့် အေးဘက်က ပင်စင်ဘယ်တော့မှမသွားတဲ့ သူတို့ ပညာကို တန်ဖိုးထားတယ်…
ဒါထက် အေးဘက်သွားတာ ခက်ခက်သိရင် စိတ်ကောက်ပြီး ဟိုတခါလို ပျောက်သွားဦးမယ်နော်…
အင်းးး အမ ထိုင်းကိုရောက်စ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ထဲ သွားတော့ မြင်မြင်သမျှမှာ ခံစားရတာ အဲသလိုပဲ..။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ အနာတရတွေနဲ့မို့ အများကြီး ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားရပါတယ်..။
အရမ်းကိုကောင်းတယ် ၀င်အားပေးတယ် ကျေးဇူးပေးဗျာ
ကောင်းတယ် ဆရာ။ မိုက်တယ်။
great, greater, greatest ....
but ... after reading poems ...i feel sth .. so sad ..
Brother .. thanks for being there !!!
ကျွန်တော်လည်း အေးဘက်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ဦးပါ။ ကိုကောင်းကင်ကို ကျွန်တော့်ကိုအပြင်မှာတွေ့ ရင်သိမှာပါ။
ကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတာ၂နှစ်ရှိခဲ့ပေမယ့် ကိုကောင်းကင်ကိုလိုကျွန်တော်မနှိုင်းယှဉ်ခဲ့မိဘူး။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့ တော်တော်ကိုကွာသွားပြီ၊ အရမ်းရမ်းကွာသွားပြီဆို ပိုမှန်လိမ့်မယ်။ သူတို့ မျက်နှာတွေမှာအနာဂတ်မဲ့နေတဲ့ အရိပ်အရောင်မျိုးတွေမရှိဘူး။ အမြဲပျော်ရွှင်တက်ကြွ နေတာပဲဗျာ။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီကဗျာကို တော့လုံးဝခံစားလို့ ရတယ်ဗျာ။ အရမ်းကောင်း။
မိုးနဲ့မြေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဆိုပြီး နာတို့ ညန်မာက တက္ကသိုလ်နဲ့ လေ အဟက်ဟက်